nri | Otu Di na Nwunye
October 1, 2019 + Asia, Tinye, Nri na ihe ọṅụṅụ, India, Isi akwukwo, Onye anaghị eri anụ
Akwukwo nke Anakpo Saag
A maara nri India dị ka otu nwere ụfọdụ nhọrọ nri anaghị eri anụ n'ụwa. Ngwa nri mara mma, nri dị ụtọ ma dị ebube, ụzọ esi nri ogologo oge, na agụụ nri na-eme ka mmadụ chefuo na anụghị ya n'ime ọtụtụ nri ha kacha mma. Saag Paneer a bụ ihe nlere vegan, yana nke ukwu! Dịtụ mfe iji wuchaa, na… GỤKWUO
July 24, 2019 + Appetizer, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, France, French, Ezi ntụziaka
Nri ofine French
Ọ bụrụ na enwere otu efere Tracy na enweghị m ike ibi na-enweghị, n'agbanyeghị ebe anyị nọ, ọ bụ French Onion Soup. Ọ bụ otu nri na, mgbe ịchọrọ ya, enweghị ihe a ga-eji dochie ya. Ma obu French Onion Soup, ma obu ihe ozo kpamkpam. Kedu ka ị ga - esi akọwa ya? Ọ dị ọkụ, na-akasi obi, buttery, cheesy, faty…. ihe niile ị chọrọ n’ezie nri nkasi obi. Nri a nke French… GỤKWUO